Video Cropper u Mac: Sida loo Dallaga Video ku Mac (Mavericks mid)
Waxaa shaki la'aan jiri doona waqtiyo aad u baahan tahay si ay noola qataarrada madow si aad video fiican ama noola aad video in la baabi'iyo meelaha aan loo baahnayn oo u dhowow ah arimaha ugu muhiimsan daawadayaasha aad 'dareenka. Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) aad si fudud ayaa kaa caawin kara gaaro in. Cropper video Tani for Mac (Yosemite ka mid ahaa) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho aragti ah ee file video ah oo qaabab kala duwan sida MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V iyo in ka badan. Hadda waxaad raaci karaan tilmaamahan fudud ee hoose si ay u bartaan sida loo noola video clips si fudud oo dhaqso. Riix halkan si aad u hesho si ay noola videos on Windows .
1 dar video aad rabto in aad noola
Orod barnaamijkan oo u tag "File"> "Add Files" in ay doortaan file video aad rabto in aad noola furmo in furaa. Waxaad kaloo isticmaali kartaa browser warbaahinta in ay dajiyaan files ka maktabadda Lugood, ama iMovie ama si toos ah jiidi oo hoos u files bartilmaameedka barnaamijka. Tani Cropper Mac video taageertaa video qaab oo kala duwan sida MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, Mpg, si aadan u baahan tahay in aad walwasho ku saabsan arrinta waafaqid.
2 Dallaga aad video
Muujinta file diirada video ah; ka dibna riix "Dalag" button in bar qalab iyo suuqa kala tafatirka ee arbushin ilaa doona. Haddii aad rabto in aad si toos ah noola video ah, dooro "16: 9" ama "4: 3" doorasho. Haddii aad rabto in gacanta ay noola, fidin iyo soo guuraan laydi ee Window kulanka xiisaha leh ee ay u qeexaan aagga jir jeclaystay. Haddii lagu qanco, guji "samayn"; haddii aan, guji "Dib u celi" in dib goobaha. Haa, waa sahlan in!
3 Save the video file ay yaryihiin
Ka dib markii lana siii aad video, riix "Play" button inay ku eegaan natiijada. Haddii lagu qanco, ku dhacay "Dhoofinta" badhanka u badbaadin. Waxaad dhoofin karaan video qaabab kala duwan sida MOV, M4V, MP4, M2TS, MTS, TP, DAT, wmv, iwm ee "qaabab" tab ama u diyaariyaan in loo wareejiyo qalab mobile ee "Qalabka" tab. In uu furmo wada hadal, dooro qaab video la doonayo ama qalab mobile, sheeg goobaha video haddii loo baahdo, oo guji "Abuur". Waxaa intaa dheer, in aad ku gubi karaa in DVD, ama geliyaan si ay u YouTube iyo Facebook isla markiiba sida aad jeceshahay.
Dhab ahaantii, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac waa ka sii badan intii Cropper video for Mac ah. Waa aalad video tafatirka MFT: marka laga soo tago qaybsama, biirtay iyo beerista video files, waxaa sidoo kale awood u aad ku darto music, qoraalka iyo koobab, dalban saamaynta gaar ah, iyo wax ka badan.
> Resource > Video > Video Cropper u Mac: Sida loo Dallaga Video ku Mac (Yosemite mid)